बजारमा उपभाेक्ताकाे भीड, जाेखिम छ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराैं
फाेटाे - सुजन गुरूङ
काठमाडौं, असोज २० गते । दशैँ नजिकिएसँगै बजारमा किनमेलका लागि मानिसको भीड बढ्दैछ । काठमाडौंका मुख्य बजार क्षेत्र न्युरोड, नयाँ बानेश्वर, असनलगायतका ठाँउमा मानिसको भीडभाड निकै देख्न सकिन्छ । जहाँ न स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना भएको छ, न त अधिकांश उपभाेक्ताले मास्कको उचित प्रयोग नै गरिरहेका देखिन्छन् । यता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नको लागि आग्रह गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण केही घटेको भए पनि जोखिम भने नटरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता भिडभाडले फेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने बताउनुभएको छ । पछिल्ला दिनमा बजारमा भीडभाड बढेको देखिएको छ । तर, कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता भिडभाडले फेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।
धेरै मानिसले अझै कोभिड विरुद्वको खोप प्राप्त गर्न बाँकी रहेकाले कोभिडको जोखिम अझै कायम रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । दशैँ नजिकिएसँगै मानिसहरु शहरबाट गाउँ फर्कने भएका कारण ग्रामीण भेगमा अझ सतर्कता अपनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । दशैँ–तिहार जस्ता चाडमा मानिसको जमघट, घुलमिल बढी हुने भएका कारण पनि संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा सचेत हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दशैँ मान्न भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश आउने मानिसको सङ्ख्या पनि बढेको देखिएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै जनस्वास्थ्यविद् डा. प्रभात अधिकारीले पनि पछिल्लो समय भीडभाड बढेकाले आगामी दिनमा कोभिडका सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्वि हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।
अहिले डेल्टा भेरियन्ट सक्रिय रुपमा नै रहेकाले अधिकांश मानिसले खोप प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुँदा संक्रमण बढ्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘मानिसको भिडभाड धेरै देखिएको छ, यसकारण सङ्क्रमण बढ्न सक्छ । मलाई लाग्छ दशैँपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि केही बढ्नेछ,’उहाँले भन्नुभयो । दशैँ मनाउन भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुको सङ्ख्या पनि बढ्ने भएकाले थप नयाँ भेरियन्ट प्रवेश गर्ने जोखिम हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।